Akụkọ - Otu esi eme ahihia ahihia ower
Njirimara nke ndị na-eji ahịhịa ahịhịa bụ ọrụ dị larịị, ọrụ dị mfe, yana ikike ịkpụchasị ike maka ihe ndị a chọrọ ịkpụ, ọkachasị ahịhịa, ma ha kwesịrị maka ala ahịhịa dị elu na nnukwu ogige. Onye na-eji ahihia ahihia na egbutu ahihia site na mkpachapu akpacha ajị nke mma ibughari na mma etinyere na onye cutter. Ihe ejiri mara ahihia ahihia ahihia na ike di ala achoro, ma o nweghi mmeghari ohuru ma obu mfe igbochi. O kwesịrị ekwesị maka ahịhịa dị larịị na nke ahịhịa. Na ahihia ahihia. Mmepụta na ojiji nke igwe eji eme ihe na-amalite n’etiti 1980s. Dabere na agụba na ọsọ ọsọ na-agba ọsọ na-agba ọsọ iji belata nri. Site na mmụba nke sayensị na teknụzụ, enyere ike ọrụ nke ngwaahịa ngwaahịa ahịhịa ọhụrụ emere ka ọ dịwanye mma, yana ọ dịwanye oke nke ukwuu, na-echekwa oge ọrụ nke ndị ọrụ ahịhịa na ịchekwa ọtụtụ ihe ndị mmadụ. Taa m ga-tumadi ịme ka ị ga-ahọrọ ndịagụba nke igwe ahịhịa.
Ube nke igwe mgboagha bụ a otutu-igwe agụba, na ntanetị ntanetị bụ mma 2-agụba. Workingkpụrụ ọrụ ahụ bụ otu. Ha niile na-agba ọsọ ọsọ na-agba ahịhịa ahịhịa. Na usoro iwu, ihe eji akwa ahihia na ahihia Nchedo doro anya, ogologo warara ahụ dị nkọ, mpaghara mkpuchi ahụ dịkwatụ. Ogologo oge nke ahihia ahịhịa agụba metụtaraihe nke ahịhịa ahịhịa mma, ọ bụghị ọdịdị ahụ.
N'ezie, nhọrọ nke ahịhịa ahịhịa ga-adị ezigbo mkpa. Nwere ike ịhọrọ ahịhịa ahịhịa ahịhịa ga-ekwekọ maka oge dị iche iche. A na-eji ụdị mma ahịhịa na-agbanwe agbanwe iji nweta nsonaazụ kacha mma n'okpuru ọnọdụ ahịhịa dị iche iche. Maka mmetụta dị mma, a ga-agbakwunye oke nku, etiti, na obere nku rotary dị ka njirimara nke ụlọ ikpe na njedebe iji nweta àgwà mbepụ dị iche iche. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iberi ahịhịa, ị nwere ike ịhọrọ ahịhịa atọmịk siri ike nke nwere ọtụtụ ọta. Ngwurugwu ahịhịa a nwere ike ịkụpịa ahịhịa ma pụọ ​​n'ime iberibe iberibe nke ọma na-enweghị emetụta ọdịdị ahụ.
Otutu onu nkwọ (Gator Agụba)
Zhengchida na-eweta agụba ndị tozuru etozu OEM Ogige agụba ụlọ mmepụta ihena ahịa dị ka ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, na ụlọ ọrụ na-elekọta ahịhịa. Mgbe mmepe na-aga n'ihu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20, Zhengchida nwere ngwaahịa zuru ezu ma wuchaa nke ogige agụba. Zhengchida nwere ihe karịrị 2000 ụdị dị iche iche nke ahịhịa ahịhịa nke na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị niile dị n'ahịa.